Gearbox ine Impeller yekumhanyisa kuwedzera
Tags: Gearbox with Impeller
Gearboxes ane akasiyana mafomu ekushandisa, senge mumhepo turbines. Gearboxes akakosha emishini chinhu chinoshandiswa zvakanyanya mumhepo turbines. Basa rayo guru nderekuendesa simba rinogadzirwa nevhiri remhepo pasi pekuita kwemhepo kune jenareta uye riite kuti riwane kumhanya kunoenderana.
Kazhinji, kumhanya kwevhiri remhepo kwakadzika kwazvo, iri kure nekumhanya kunodiwa nejenareta kuti ibudise magetsi. Inofanirwa kuzadzikiswa kuburikidza nekumhanyisa-inowedzera mhedzisiro yeiyo giya peya pabhokisi, saka iro giya rinoshevedzwa kunzi rinokurumidza-kuwedzera bhokisi.
Iyo giya bhokisi rinotakura iro simba kubva kune vhiri remhepo uye iro rezvekuita simba rinogadzirwa panguva yegiya kufambisa, uye rinofanirwa kuve neyakaomarara yakakwana yekumira kuita kwesimba uye torque, kudzivirira deformation uye kuve nechokwadi chekufambisa mhando. Dhizaini yegearbox redzimba inofanirwa kuitwa zvinoenderana nezvinodiwa nemhepo turbine simba rekufambisa dhizaini, kugadzirisa uye mamiriro ezvinhu egungano, uye nyore kwekutarisa uye kugadzirisa. Nekukurumidza kukurumidza kweiyo gearbox indasitiri, mazhinji uye akawanda maindasitiri nemakambani akasiyana akashandisa gearboxes, uye makambani mazhinji uye mazhinji akagadzira nekukura muindasitiri yebhokisi.
Iyo gearbox inoenderana neyakaenzana modular dhizaini yeyuniti dhizaini, iyo inoderedza zvakanyanya mhando dzezvikamu uye zvikamu, uye inokodzera kugadzirwa kukuru uye kusarudzika kusarudza. Iyo yemhepo bevel magiya uye mahelical magiya eiyo anodzora akagadzirwa epamusoro-soro alloy simbi ne carburizing uye kudzima. Iko zino kuomarara kwakareba kunge 60 ± 2HRC, uye iro zino pamusoro pekugedza kururamisa kwakakwira se5-6.
Iwo mabheyaringi ezvikamu zvekutepfenyura ese emumba anozivikanwa marangi mabheringi kana akaunzwa kunze mabara, uye zvisimbiso ndiwo mafupa emafuta zvisimbiso; chimiro chebhokisi rekukweva, iyo yakakura nzvimbo yenzvimbo yedare remakurukota uye fan hombe; kuderedza tembiricha kukwira uye ruzha rwemuchina wese, uye nekuvandudza kuvimbika kwekushanda, Simba rekutapudza rinowedzera. Iyo inogona kuona yakafanana shaft, kurudyi-kona shaft, yakamira uye yakatwasuka general bhokisi. Nzira dzekuisa dzinosanganisira mota yekubatanidza flange uye shaft yekuisa; iyo goho shaft inogona kuburitsa pamakona akakona kana yakatwasuka. Solid mugodhi uye mhango mugodhi, flange mhando goho mugodhi dziripo. Iyo gearbox inogona kusangana nezvinodiwa zvekumisikidza nzvimbo nhete, uye inogona kupihwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Vhoriyamu yayo iri 1/2 diki pane yeiyo yakapfava giya rinodzora, huremu hwaderedzwa nehafu, hupenyu hwebasa hwakawedzerwa ne3 kusvika ku4 nguva, uye huremu hwekutakura hunowedzerwa ne8 kusvika kagumi nguva. Inoshandiswa zvakanyanya mukudhinda uye kupakata michina, matatu-e-matatu garaji michina, yekuchengetedza michina michina, kuendesa zvishandiso, michina yemakemikari, metallurgical michina yekuchera, simbi nesimbi simba midziyo, kusanganisa michina, mugwagwa michini michina, shuga indasitiri, mhepo simba kugadzira, escalator uye erevheta inotyaira, kuvaka ngarava, mwenje Yakakwira-simba, yakakwira-kumhanya reshiyo, dzakakwirira-torque zviitiko senge maindasitiri munda, papermaking munda, metallurgia indasitiri, tsvina kurapwa, zvekuvaka indasitiri, kusimudza michina, conveyor mutsetse, gungano mutsetse, nezvimwe. chiyero chakanaka chemutengo-chekuita uye chinowirirana nekuenderana kwemidziyo yemuno.
Iyo gearbox ine mabasa anotevera:
1.Kumhanyisa uye kudzikisira, iyo inowanzo kunzi inoshanduka inomhanyisa giya bhokisi.
2. Chinja nzira yekufambisa. Semuenzaniso, isu tinokwanisa kushandisa maviri maseketi magiya kuendesa iro simba rakatwasuka kune rimwe rinotenderera shaft.
Shandura torque inotenderera. Pasi pemamiriro akafanana emagetsi, iyo inokurumidza giya rinotenderera, idiki torque pane shaft, uye zvinopesana.
5. Kugoverwa kwesimba. Semuenzaniso, isu tinokwanisa kushandisa imwe injini kutyaira akawanda evaranda miseve kuburikidza neiyo huru shaft yegearbox, kuti tizive mashandiro einjini imwe kutyaira akawanda mutoro.
2. Chinja nzira yekufambisa, semuenzaniso, tinogona kushandisa magaidhi maviri echikamu kuendesa simba kune imwe shaft inotenderera yakatwasuka.
Shandura torque inotenderera. Pasi pemamiriro akafanana emagetsi, iyo inomhanyisa kumhanya kweiyo giya, idiki torque pane shaft, uye zvinopesana.
4. Clutch basa: Tinogona kuzadzisa chinangwa chekuparadzanisa injini kubva pamutoro nekuparadzanisa maviri ekutanga meshed magiya. Semuyenzaniso, akamedura batira uye zvichingodaro.